Ultrasonic milina fanantananana plastika ho an'ny fangalarana mirindra Thermoplastic
Home / Ultrason Welder / 15KHz mpanamboatra ultrasonic / Masinina fanamafisam-peo plastika ultrasonic ho an'ny fantsom-panaovana fantsom-pifandraisana milamina
Masinina fanamafisam-peo plastika ultrasonic ho an'ny welding izay manatevin-daharana ny faritra thermoplastic
Sokajy: 15KHz mpanamboatra ultrasonic, Ultrason Welder, welder Tags: mividy lasera plastika ultrasonika, mividy welder ultrasonic, lasitike plastika sonic, mpanamboatra lamba vita amin'ny ultrasonic, mpanome plastika ultrasonic, mpanamory plastika ultrasonic amidy, vidin'ny welder plastika ultrasonic, Mpanome mpamatsy plastika ultrasonic, ultrasonic lasantsy plastika, Fitaovana lasantsy vita amin'ny plastika ultrasonic, milina famonosana plastika ultrasonic, rafitra vita amin'ny lasantsy plastika ultrasonic, Mpanotrona ultrasonic, ultrasonic welder amidy, vidin'ny fanodinana ultrasonic, Fitaovana lasantsy ultrasonic, plastika vita amin'ny plastika
Ultrastika milina fanantona plastika | ultrasonic mpihaza thermoplastic | fitaovana fanamainana plastika ultra sonic miaraka amin'ny Auto Frequency Chasing
Ny lasantsy vita amin'ny plastika ultrasonika dia teknika indostrialy izay ny fihenan'ny vatan'ny accoustic ultrasonic avo lenta dia ampiharina eo an-toerana amin'ny mason-tsivana notazonina miaraka amina tsindry hamoronana lasantsy. Ampiasaina amin'ny plastika sy ny metaly, ary indrindra amin'ny fiarahana amin'ny fitaovana tsy mitovy. Ao amin'ny fanantona ultrasonic, tsy misy bolts mampifangaro, fantsika, fitaovana famatsiana na haingon-trano ilaina mba hamatorana ireo akora ireo. Rehefa ampiharina amin'ny metaly, ny toetra mampiavaka ity fomba ity dia ny mari-pana mijanona tsara eo ambanin'ny faritra mitsonika ireo fitaovana voarohirohy ka manakana ny fananana tsy tiana dia mety hipoitra noho ny fiakaran'ny mari-pana ny fitaovana.
Ultrasonic Welding Horns / lasantsy lasantsy vita amin'ny ultrasonic:
Ny fampiharana ny fanodinana ultrasonic dia be ary hita any amin'ny orinasa maro ao anatin'izany ny herinaratra sy solosaina, automatique ary aerospace, fitsaboana ary fonosana. Na ny entana roa azo ametrahana lasantsy ultrasonically dia voafaritry ny hateviny. Raha tena matevina izy ireo dia tsy hiaraka amin'izy ireo ity dingana ity. Ity no sakana lehibe amin'ny fametrahana metaly. Na izany aza, tariby, fifandraisana mikrofosika, vy vy, foil, ribon ary meshes dia matetika mifamatotra amin'ny fampiasana welding ultrasonic. Ny lasantsy ultrasonika dia teknika tena malaza amin'ny famatorana thermoplastika. Izy io dia haingana sy mora ampiasaina miaraka amin'ny fotoana lasantsy matetika eo ambanin'ny segondra ary tsy misy rafitra ventilasy takiana hanesorana hafanana na havanana. Ity karazana lasitsy ity dia matetika ampiasaina amin'ny fananganana fivoriambe izay kely loatra, be pitsiny, na marefo loatra amin'ny teknika fanaterana mahazatra kokoa.